News Archives - ReaderGonnaRead
၀မ်းသာ စရာသတင်းပါ / ဂုတ်တွင်း ယာယီ တံတား စတင် ဖြတ်သန်းခွင့် ရပါပြီ သြဂုတ်လ ၊ ၂၀ ယနေ့ (၂၀-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နေ့ခင်း (၁၃:၀၀) အချိန်မှ စတင်ကာ အိမ်စီး ကားငယ်များ အား ဂုတ်တွင်း ယာယီ ဘေလီတံတားပေါ်မှ …
တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲက ပိတ်မိနေသူတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ တိုင်ပင်နေကြပြီး သွားရောက်ကူညီခွင့်ပေးဖို့၊ နှောင့်ယှက် တိုက်ခိုက်တာတွေ မလုပ်ဖို့ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ သြဂုတ် ၁၉ ကမ္ဘာ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာ လူမှုရေးအဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ပါတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။…
မိုးလေးတဖွဲဖွဲကျနေတဲ့မနက် အာရုံတက်မှာ ဂုတ်တွင်းပတ်ပတ်လည်တွင် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် 3ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့ အပြန်အလှန် ပစ်ခက် တိုက်ခိုက်နေ၍ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ သွားလာ၍မရဖြစ်နေသည်။ ခရီးသည်များနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကားဆရာများဒုက္ခရောက်နေချိန် မိုးမြင့်သာထမင်းဆိုင်သည်သာ ကားဆရာများနှင့် ခရီးသည်တို့အတွက် အားထားမှီခိုရာ နေရာတခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်သာနှင့်ရေချိုးစရာတို့မှာ အဆင်ပြေလှပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့်လဲ ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ သို့သော်လည်း မိုးမြင့်သာထမင်းဆိုင်အတွင်းနှင့်…
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါ ထူးထူးဆန်းဆန်းဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ ယနေ့အချိန်အထိ လူတွေ ရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ အပြောများနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဂြိုလ်သားတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အချို့ကလည်း အခြားကမ္ဘာက ဧည့်သာည်များလို့ ခေါ်ကြသလို အချို့ကလည်း တစ်ကယ်မရှိဘူးလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစတစ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေ အရ သူတို့ဟာ…
Myanmar’s Got Talent ပြိုင်​ပွဲမှာ ဝင်​ပြိုင်​ခဲ့တဲ့ ပြိုင်​စံရှား ဂစ်​တာသမားတစ်​​ယောက်​ရှိပါတယ်​။ သူ့နာမည်​ကို မီး​ဝေလို့​ခေါ်ပါတယ်​။ သူဟာ မ​တော်​တဆမှုတစ်​ခုကို ကံဆိုးစွာကြုံ​တွေ့ခဲ့ရပြီး လက်​တဖက်​မရှိ​တော့သူဖြစ်​​ပေမဲ့ ဘဝကို အရှုံးမပေးပဲ ​ခြေ​ထောက်​နဲ့ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းတွေဆိုနေတဲ့ မီးဝေပါ။ မီးဝေ (Myanmar’s Got Talent) ရဲ့” Guitar Man…
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ရှိ မြေအောက်လိုဏ် ခေါင်းအတွင်း ရေနှင့်မျောပါသွား ပြီး သေဆုံးခဲ့သည့် မြန်မာလုပ်သား ကိုဇွဲလင်းမောင်အတွက် ဆိုးလ် မြို့တော်ဝန်က လာရောက်တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှအလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးဇေယျာတင်ဝင်းတင်က ပြောသည်။. မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းအ တွင်း သေဆုံးသည့် အသက် (၂၃)နှစ်အရွယ် ကိုဇွဲလင်းမောင်အ တွက် သြဂုတ် ၅…
လက်မှတ်ပေါက်ဈေး(၁)သိန်းမှ သိန်း(၂၀)အထိရှိ လာတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗီရာနဲ့ အောင်လအန်ဆန်တို့ ထိုးသတ်မည့်ပွဲ.
One Championship ဝိတ်တန်းနှစ်ခု ချန်ပီယံတွေဖြစ်ကြတဲ့ အောင်လအန်ဆန် နဲ့ ဘရန်ဒန် ဗီရာ တို့ဟာ Light Heavy Weight ချန်ပီယံဆုအတွက် လာမည့် အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်နေ့၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန် နှင့် ဘရန်ဒန် ဗီရာ တို့သတ်မယ့်ပွဲအတွက်…
လာမယ့် အောက်တိုဘာ (၁၃)ရက်မှာ မြန်မာ့နာမည်ကျော် တိုက်ခိုက်ရေးသမား အောင်လအန်ဆန် နဲ့ ထိုးသတ်ရမယ့် ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန် သွေးနှောကပြားကြီး ဗီရာက သူနဲ့အောင်လအန်ဆန် တို့ရဲ့ ထိုးသတ်ရမယ့်ပွဲစဉ်အကြောင်းကို မင်းသားကြီး The Rock ဆီ ဖောက်သည်ချခဲ့ပါတယ်။ One Championship ကနေ စီစဉ်တဲ့ စကားပြောခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ Hobbs…
တက္ကစီဆရာက မုဒိမ်းမကျင့်ပဲ လိမ်ပြီး တိုင်ခဲ့မိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်
အင်္ဂလန်​နိုင်​ငံ၊ မန်​ချက်​စတာမြို့က အသက်​ ၂၇ နှစ်​အရွယ်​ ​လောရာဟုဒ်​ ဆိုသူအမျိုးသမီးဟာ တက္ကစီ ကား​အ​နောက်​ခန်းထဲမှာ တက္ကစီဆရာရဲ့ သားမယားပြုကျင့်​ခြင်းကို ​​ခံခဲ့ရတယ်​လို့ လိမ်​လည်​တိုင်​ကြား အမှုဖွင့်​ဆိုခဲ့မှုနဲ့ ​ထောင်​ဒဏ်​ ၃ နှစ်​ ချမှတ်​ခံခဲ့ရပါတယ်​။ အမှုဖွင့်​ဆိုခံရတဲ့ တက္ကစီဆရာကို ရဲတပ်​ဖွဲ့က အစပိုင်းမှာ လက်​ထိပ်​ခတ်လို့ ​ဖမ်းဆီးစစ်​​ဆေးခဲ့ကြ​ပြီး သူဟာ…
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အထွဋ်အမြတ်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပဲ ထွန်းကားအောင် မော်ကွန်းသစ်ကို ရုရှားနိုင်ငံမှာ စိုက်ထူလိုက်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ ပုံစံတူစေတီတော် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ယခင်နှစ်ကတည်းက ကြိုးပမ်းနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာမဲ့တွေများပြားတဲ့ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ဦးစွာ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် စေတီတော် တည်ဆောက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစေတီတော်ကို…